Raiisel wasaarihii hore ee Faransiiska François Fillon ayaa ku xukumay shan sano oo xabsi ah - teles relay
Raiisel wasaarihii hore ee Faransiiska François Fillon ayaa ku xukumay shan sano oo xabsi ah
Raiisel wasaarihii hore ee Faransiiska François Fillon wuxuu ahaa Raiisel wasaarihii Madaxweyne Nicolas Sarkozy intii u dhaxeysay 2007 iyo 2012.
Paris (CNN) Odayga Raiiselwasaaraha Faransiiska François Fillon, afadiisa Pénélope iyo kuxigeenkiisii ​​hore Marc Joulaud ayaa lagu helay dambi ah lunsashada hanti dowladeed, taakuleyn iyo kaalmayn maxkamada Paris.
Xukunka ayaa soo gabagabeeyey in Fillon uu siiyay xaaskiisa iyo carruurtiisa, sidoo kale Joulaud, boqolaal kun oo yuuro ah mushaharka shaqaalaha ee shaqo yar ama aan shaqeyn.
Fillon waxaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah, oo seddex ka mid ah la hakiyey, iyo sidoo kale ganaax dhan 375 Euro ($ 000) iyo ganaax toban sano ah oo la saaray inuu istaago doorashada.
Xayiraadda Yurub ee safarka Mareykanka wuxuu dirayaa fariin sharaf dhac ah
Xaaskiisa Penelope waxaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah oo ganaax ah iyo ganaax dhan 375 euro.
Fillons iyo la-eedeeyaha ayaa sidoo kale lagu amray inay u celiyaan wax ka badan hal milyan oo Yuuro ($ 1,13 milyan) Golaha Qaranka Faransiiska.
"Go'aankan ... ma ahan mid cadaalad ah waxanan rafcaan ka qaadan doonnaa," ayuu yiri BFM-TV Antonin Lévy, qareenka Fillon. Waxaa jiri doona tijaabo cusub. Maalmihii la soo dhaafay, waxaan bilownay inaan fahanno xaaladaha nacasnimada ah ee baaritaankaan lagu bilaabay. ”
Fadeexada ayaa soo baxday
Fillon wuxuu ahaa Raiisel wasaare intii uu ahaa madaxweyne Nicolas Sarkozy intii u dhaxeysay 2007 iyo 2012.
Dhibaatooyinkiisa ayaa leh bilaabay sanadkii 2017-kii markii wargeyskii Faransiiska ee satirical Duck Chained wuxuu leeyahay Waxaa la daabacay warbixinno sheegaya in xaaskiisa iyo labo ka mid ah carruurtiisa qaangaarka ah ay kasbadeen ku dhawaad ​​hal milyan oo yuro iyada oo ah kaaliyeyaasha baarlamaanka ee shaqooyinka la xiriira musuqmaasuqa.
Wuxuu diiday sheegashadaas waqtigaas, isagoo sheeganaya in xaaskiisu ay shaqaysay 15 sano oo ay ahayd kaaliyeheeda isla markaana qabtay xilal badan oo ay ka mid tahay maareynta jadwalka iyo u matalay xafladaha dhaqanka. Wuxuu kaloo sheegay in gabadhiisa iyo wiilkiisa loo shaqaaley jagooyin lamid ah 15 bilood iyo lix bilood siday u kala horreeyaan, taasoo uu sheegay inaysan sharci-darro ahayn, laakiin ay tahay "khalad xagga xukunka ah".
Fadeexada ku ololeeyo ololihiisa loogu talagalay madaxtinimada Faransiiska ee 2017 oo fursad u siisay guusha Emmanuel Macron.
Maqaalkani wuxuu ugu horeyn u muuqday: https: //edition.cnn.com/2020/06/29/europe/france-franois-fillon-jail-intl/index.html